महान वैज्ञानिक हकिङको मृत्युको ६ महिनापछि बाहिरियो उनका डरलाग्दा भविष्यवाणी ! - PuraKhabar
प्रचण्डको दाबी - समृद्धिमा नयाँ रेकर्ड बन्छ
श्रृलङ्कामा लगातार ८ वटा विस्फोटमा १९० को मृत्यु
मनकामना दर्शनको लागि गएको बस घुम्ती मोड्ने क्रममा त्रिशूलीमा खस्दा २ जनाको ज्यान गयो, उद्धार कार्य हुँदै
महान वैज्ञानिक हकिङको मृत्युको ६ महिनापछि बाहिरियो उनका डरलाग्दा भविष्यवाणी !
संसारकै सबैभन्दा महान भौतिकशास्त्री मानिएका वैज्ञानिक स्टिफन हकिङको मृत्युको ६ महिनापछि प्रकाशित भएको उनको एक पुस्तकले विज्ञानजगतलाई हल्लाइदिएको छ । ‘ब्रिफ आन्सर्स टु द बिग क्वेश्चन्स’नामक यो पुस्तकमा यतिसम्म डरलाग्दा भविष्यवाणी गरिएका छन् कि पूरै संसार त्रसित बनेको छ । हकिङले यो पुस्तकमा पृथ्वी र मानव जातिकै विनाशको भविष्यवाणी गरेका छन् ।
हकिङले भयानक जलवायु परिवर्तनदेखि एलियन (अर्को ग्रहका प्राणी)को आक्रमणसम्मका भयानक भविष्यवाणी गरेका छन् । उनले पुस्तकमा यी सबै भविष्यवाणी सत्य हुने दावी समेत गरेका छन् । हकिङले गरेको सबैभन्दा भयानक भविष्यवाणी हो पृथ्वीको विनाश । हकिङले अहिलेसम्मका भौतिकशास्त्रीले गरेको अनुमान भन्दा निकै फरक तरिकाले पृथ्वीको अन्त्य हुने भविष्यवाणी गरेका छन् । उनले पृथ्वीको अन्त्य कुनै अन्तरिक्ष दुर्घटनामा हुने भविष्यवाणी गरेका छन् । मानव जातिले पत्तै नपाइ एकाएक पृथ्वीको विनाश हुने उनले दावी गरेका छन् ।
उनले लेखेका छन् ‘अन्तरिक्ष जति शान्त देखिन्छ त्यति शान्छ छैन । त्यहाँ ठूलो उथलपुथल मच्चिएको छ । त्यहाँ कैयौं ताराहरु अर्को तारालाई निल्छन् । कस्मिक किरणले पलभरमै कुनै ग्रहलाई बर्बाद बनाउन सक्छन् । अन्तरिक्षमा विशाल उल्कापिण्डहरु तीव्र गतिमा यताउता दौडिरहेका छन् । यदि यी कुनै पनि शक्तिको सामाना पृथ्वीले गर्नुपर्यो भने पृथ्वीको विनाश हुनेछ ।’ स्टिफनका अनुसार ६.६ करोड वर्ष पहिले पनि यस्तो दुर्घटना भएको थियो र पृथ्वीमा सबथोक बर्बाद भएको थियो । यस्तै दुर्घटना अब फेरि हुनेछ र भएरै छाड्नेछ । यो विज्ञानको कोरा कल्पना नभइ फिजिक्स नियममा आधारित भएको हकिङले बताएका छन् ।
हकिङले अर्को भविष्यवाणी गर्दै लेखेका छन् कि भविष्यमा मानव जातिले आफ्नै जेनेटिक एडिटिङ गरेर सुपरह्युमन (महामानव)को अर्को प्रजाति बनाउनेछन् । यो प्रविधिबाट मानिसले आफ्नो जीनमा एडिटिङ गरेर कुनै खास गुण वा शक्ति पाउन सक्छन् । उनीहरु खास खराबी छोड्न सक्न्ेछन् । कुनै पारिवारिक रोग निर्मूल गर्न सक्छन् । यसरी बन्ने प्रजाति यस्तो प्रजाति हुनेछ जसले आफैंले आफैंलाई अझै राम्रो तरिकाले डिजाइन गर्न सक्नेछन् । तर, आफैंलाई अझै राम्रो बनाउने यो होड निकै विनाशकारी हुनेछ ।
रेलका लागि ३ हजार कर्मचारीको माग !
अब अर्चना पनेरु अब बिग बोसमा !
April 15, 2019 Purakhabar News 0
काठमाडौं : नेपाल टेलिकमले विभिन्न प्याकेजसहित स्प्रिङ अफर उपलब्ध गराएको छ। शनिबारबाट सुरु भएको यो योजना ९० दिनसम्म...
April 14, 2019 Purakhabar News 0
साओमीको फोल्डेबल स्मार्टफोनमा हुनेछ ६० मेगापिक्सलको क्यामेरा, सामसुङ भन्दा सस्तो पनि !
काठमाडौं/एजेन्सी । यो वर्ष सामसुङ, हुआवे र साओमी (Xiaomi)ले फोल्डेबल स्मार्टफोन सार्वजनिक गर्दैछन् । साओमी (Xiaomi)को...
April 12, 2019 Purakhabar News 0
टेलिकमले ल्यायाे नयाँ वर्ष अफर : २०० रुपैयाँमा ३ जिबी डाटा, २ सय एसएमएस, २ सय मिनेट कल
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले नयाँ वर्ष २०७६ लाइ लक्षित गरी नयाँ अफर ल्याएकाे छ । साे नयाँ...
April 19, 2019 Purakhabar News 0
टिभी सोमा डेब्यु गर्दै अभिनेत्रि करिना , लिइन् एउटै कार्यक्रममा निर्णायक बसेको यति महँगो पारिश्रमिक
एजेन्सी – पछिल्लो समय निकै चर्चामा आइरहेकी अभिनेत्रि हुन् करिना कपुर । अहिले उनी एक कुराले...
बाहुबली’ का ‘कटप्पा’ र ऐश्वर्या संगै फ्लिम खेल्दै
फिल्म ‘बाहुबली’ बाट निकै चर्चामा आएका अभिनेता सत्यराजले बलिउड अभिनेत्री ऐश्वर्या रायले जोडी बाध्ने भएकी छिन्...
नायिका वर्षा शिवाकोटी भन्छिन् ; “कलाकारको भ्यालु घटाउने टिकटक बन्द हुनुपर्छ”
नेपाली सिनेमा क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दे आएकी नायिका हुन बर्षा सिवाकोटी । उनीसंग संगै पर्दामा...
April 21, 2019 Purakhabar News 0
इण्डियन प्रिमियर लिगमा नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेको उत्कृष्ट बलिङ , पञ्जाबलाई दिल्लीले ५ विकेटले हरायो
काठमाडौं – भारतमा जारी १२ औं संस्करणको इण्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्रिकेटमा दिल्ली क्यापिटल्सले किङ्स इलाभेन...
सन्दीपलाई नखेलाउनु दुर्भाग्य बनेकै हो त ? दिल्लीको नमीठो हार
काठमाडौं : इन्डियन प्रिमियर लिग(आईपीएल)को बिहीबार राति भएको खेलमा नेपालका लेग स्पीनर सन्दीप लामिछाने आवद्ध टोली दिल्ली क्यापिटलले...
April 18, 2019 Purakhabar News 0
५ बैशाख , बुटवल । स्मृति स्पोर्ट्स क्लबले आठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा प्रदेश न ५ बाट...
April 20, 2019 Purakhabar News 0
आज जीतगढी उत्सव: प्रधानमन्त्री सहितका शीर्ष नेता सहभागि हुदै
बुटवल । आज बैशाख ७ गते ऐतिहासिक दिन । बुटवलको जीतगढी किल्लाबाट तत्कालिन नेपाली सेनालाई जीत्न...
५ बैशाख, बुटवल । तत्कालीन अंग्रेजलाई दुई सय वर्षअघि पराजित गरेको खुशियालीलाई बुटवल उपमहानगरपालिकाले जीतगढी विजय...
बुटवलको ट्राफिक चोकमा सन्कास्पद बस्तु फेला
बुटवलको ट्राफिक चोकमा सन्कास्पद बस्तु फेला बम हुन सक्ने प्रहरी घटना स्थानमा नीस्क्रीय गराउने तयारी हुदै...